Afrikaa Kibbaatti Lammileen Itiyoophiyaa 10’ol Dhibee Kooronaan Du'uun Himame
Hagayya 11, 2020
Faayilii - Hoospitaala namoonni vaayrasii koronaan qabaman itti yaallaman, Afrikaa Kibbaa
Kooronaan erga mullatee dhalattoonni Itiyoophiyaa biyya Afriikaa Kibbaa jiraatan 10 ol lubbuun isaanii dhibee kanaan darbeera.
Afriikaa kibbaatti barreessaan Hawaasa Lammilee Itiyoophiyaa, Obbo Faanos Haylee lammileen Itiyoophiyaa dhibee kanaan lubbuun darbe kun kutaalee biyyaatti gara garaa keessa ka jiraataa turan jedhan.
‘Haga Yoonaa Afrikaa Kibbaatti Lammilee Itiyoophiyaa 10’ol Dhibee Kooronaan Lubbuunsaaniii Darbeera’ Bakka Bu’oota Hawaasaa
‘Afriikaa Kibbaa keessa naannolee sagaltu jiru, lammileen keenyas bakka gara garaati jiraatu, naannolee kana keessaa egaa haga yoonaa lammileen keenya ka dhibee kanaan qabamanii dandamatuu dadhaban xinnaatu namootni kudhan lubbuun isaanii darbee jira. Seera Addunyaa ta’ee namni takka yoo dhibee kanaan du’e reeffi isaa biyyaa bahuu hin danda’uu, egaa warri kun martuu asumatti du’aniiti kan awwaalaman’ Obbo Faanos Haylee; Barreessaa Hawaasa Lammilee Itiyoophiyaa Afriikaa Kibbaa jiraatanii.
Lammileen Itiyoophiyaa kooronaan du’an jedhame kun jiraattota naannoo magaala Johaanisberg, limpooppoo, Eastern Cape fi Western Cape akka ta’anis Obbo Faanos himanii jiru.
Kooronaan duuba Jireenyi itti hammaachuus lammileen Itiyoophiyaa Afriikaa kibbaa jiraatan ni dubbatu. Dhalataa Oromoo ka ta’e Gaaddisaa Gammachuu Afriikaa Kibbaa keessa ganna saddeetiif akka jiraate hime. Hojii Guyyaa guyyaatti hojjetaa tureen jiruu ka moo’atee jiraatu Gaaddisaan haala amma baqattoonni biyyas jiraatan keessa jiran yoo ibsu, ‘Waanti jiru baayyee nama gaddisiisa’ jedhe. Lammileen Itiyoophiyaa duraan hojii humnaa hojjetanii jiraatan, hojiin waan dhibeef kaan waan nyaatan dhabanii beelarra jiraachuu, kaanis mana kiraa kaffalachuu dhabanii ka daandii gubbaatti hafan jira jedhe.
Kadir Waarraas dhalataa Oromoo naannoo Magaalaa Johaanisberg jiraatudha. Innis rakkoo dhibee kanaan dhufe duuba, dukkaanni isaa irraa cufamuu, dubbate.
Dhalattoonni Oromoo biyyas jiraatan; keessumaa warri lammii biyya alaa ka biyya Afriikaa Kibbaa jiraatu gargaarsa waan hin qabneef gidduu kanatti rakkoo keessa jirraa jedhu. Kadir fi Gaaddisaan akkasumas baqattoonni kaan ‘warra biyyaa mootummaatu gargaara; baqattoota garuu qaamni gargaaru hin jiruu’ jechuun komatu.
Nawaawii Musaa bakka bu’aa Hawaasa baqattoota Oromoo Afriikaa Kibbaa akkasumas miseensa gaggeessitoota Hawaasa lammilee Itiyoophiyaa Afrikaa kibbati.
Dhimma kana ilaalchisuun yoo dubbatan, duraan yeroo labsiin nami akka manaa hin baane labsame warra waan nyaatu dhabe miseensonni hawaasaa gargaaruu himanii amma garuu hamma tahe namni bahee jiruutti akka jiru, kan rakkoo ta’e ammoo dhabamuu gabaafi uggura gurgurtaa meeshaalee muraasarra jiru ta’uu mirkaneessan
Obbo Nawaawiin akkasumas Obbo Faanos rakkoon kun yoo hammas mullate warra waan nyaatu dhabee rakkate gargaaruun itti fufaa jedhanii jiru. Obbo Faanos tumsa gargaarsaaf dhaabbata godaantotaa IOM
gaafachuu himanii, lammilee Itiyoophiyaa amma Afrikaa Kibbaatti rakkataa jiran ka biyyatti galuuf barbaadanii fi galmaa’an 80’f geejjibi akka qophaayes ifoomsanii jiru.
Jaarmayaa Mootummootaatti Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa kaleessa, Ardii Afriikaa keessaa namootni dhibee Kooronaan qabaman miiliyoona tokko darbuu, kuma 21 ol ka’an ammoo Afriikaadhuma keessaa dhibee kanaan lubbuu darbuun himee, Afriikaa keessaa Afriikaan kibbaas ka lammileenshee miiliyoona walakkaa ol Kooronaan qabaman addunyaarraa sadarkaa shanaffaarra jiraachuu ibsee jira. Dr. Matshidiso Moeti, Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti Diirekterri Damee Afrikaa dhaabbanni isaanii Afriikaa kibbaaf tumsa akka godhu himanii, kanaaafis ogeeyyii fayyaa nama 40 garasitti erguuf jira jechuun kaleessa VOA’f himanii jiru.
Hogganttuun Paartii Mormituu Belaaruus Biyya Gadhisanii Ba'an
Raashaan Talaalii Farra Dhukkuba Koviid-19 Argadhe Jetti
Robnii Jabaan Ertraa Keessatti Badii Geesisee
Itiyoophiyaa Keessatti Qaala'insii Jireenya Dabalaatuma Jira
Itiyoophiyaa Keessatti Meeshaalee Waraanaa Xixxiqaa Galmeessuuf Qophiin Akka Jiru Ibsame
Hookkara Irreecha Bara 2016 Irratti Ka’een Namni Obbleessaa Isaa Dhabe Tokko Yaadannoo Isaaf Mana Dubbisaa Bishooftuutti Ijaare
Affaar Keessatti Dhuka’aan Waraansa Tigiraay Irraa Lafa Keessatti Hafe Jiraattotarra Miidhaa Geessisuun Himame
Namoonni Tolee Keessatti Ajjeefaman 338: Mootummaa
Falmiin Daangaa Naannoo Al-Fashaqaa Maal Irra Jira?